इन्डियन आइडलको सेटमै भयो नेहा र आदित्यको विवाह ! - Sidha News
इन्डियन आइडलको सेटमै भयो नेहा र आदित्यको विवाह !
काठमाडौं। पछिल्लो समय बलिउड नायिका नेहा कक्कर र आदित्य नारायण झाको निकै चर्चा छ । केहि समयदेखि यी दुई विवाह बन्धनमा बाधिने हल्ला चल्दै आएको छ । भारतिय मिडियाका अनुसार अहिले यी दुईको विवाह बारे फरक कुरा खुलेको छ ।
यी दूईको विवाह साँच्चिकैभन्दा पनि सोको टिआरपीको लागि गरिएको बताइएको छ । केहि समयदेखि यी दूईको फेब्रुअरी १४ मा विवाह हुने हल्ला चलेको थियो । तर इन्डियन आइडल शोको टिआरपीका लागि यस्तो खेल रचिएको बताइएको छ ।
यसबारे उदित नारायण झाले नै बताएका छन् । शोको टिआरपीका लागि विवाह हुने हल्ला फिजाइएको बताइएको छ। नेहा कक्कर र आदित्य नारायण झाको इन्डियन आइडलको सेटमा गरेको विवाह फेब्रुअरी १४ दिन टेलिकास्ट गरिने जनाइएको छ।